Fihaonam-be rezionaly Miarinarivo 25 jolay 2015 - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
27 juillet 2015 zokyidealy
Miarinarivo, 100km miala ny renivohitr’i Madagasikara. Renivohitry ny faritra Itasy izay manana velaran-tany eo amin’ny 6,993 km2 eo ho eo, ary efa ahitana mpino Apokalypsy maro dia maro. Tamin’ny taona 2000 no nisian’ny fiangonana voalohany tamin’ity faritra ity, ary feno 15 taona izy ankehitriny.
Madagascar-Itasy_Region (source: Wikipedia)
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ary ny sabata 25 jolay 2015 lasa teo ny fanamarihana izay faha 15 taona nisian’ny fiangonana tao faritra Miarinarivo Itasy, izay niarahana tamin’i Pasteur Mailhol André Christian Dieu Donné, sy ireo delegasiona manokana avy aty amin’ny foibe Maneran-tany ny Fiangonana Apokalypsy;
nontronin’ireo vahiny maro be avy tamin’ny lafy valon’ny nosy; ka saika nahitana solon- tena avokoa na ny avy any amin’ny farany avaratra indrindra, na avy any amin’ny faritra atsimo indrindra ary indrindra ny tao anivon- tany. Nanana ny nampiavaka azy araka izany ity fotoan-dehibe ity satria dia tamin’io fotoana io no nanatanterahana ny fampitàna ireo andiany farany mbola tsy niampita ny onin’i Jordana ho an’ity faritr’i Miarinarivo ity. Niisa teo amin’ny 35 mianadahy mianaka teo ho eo izy ireo no niampita izay onin’ny Jordana izay, izay marihana hatrany moa fa andiany farany izy ireo tany amin’iny faritra atsimo andrefan’ny renivohitra iny.
Pasteur Maminirina Gilbert sy ny Pasteur RALAIARIFERA Jeannot Albert
Nanatanteraka sy nanotrona izany fiampitana izany hatrany Filoha mpanorina ny Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany, ny Pasteur Mailhol André Christian Dieu Donné, teo ihany koa ireo pasteur avy amin’ny faritra manodidina sy avy any amin’ny faritany, anisan’izany ny Pasteur Maminirina Gilbert avy any amin’ny faritra Port Berger, Pasteur Heriniana Rakotozafy avy tao amin’ny rezionaly Antsirabe , Pasteur Rakotomahefa charles (faritra Arivonimamo), Pasteur Ralaiarifera Jeannot Albert miandraikitra ny faritra Itasy .
Ity ilay fanomezana manokana ho an’i Pasteur Mailhol mivady
Taorian’izay fiampitana ny onin’ny Jordana izay ary dia nisy ny fitsofan-drano zaza narahina fanolorana mari-pahatsiarovana manokana tamin’ny fandalovan’ny Filoha mpanorina ny Fiangonana Apokalypsy, ny pasteur Mailhol ny tapany hariva
ary faranana tamin’ny fankalazana ny paska lehibe izay nomarihana tamin’ny alalan’ny firaisana latabatra amin’ny Tompo.
Nisongadina ihany koa nadritra ity fotoan-dehibe ity ny hafatra manokana izay nentin’ny mpanompon’Andriamanitra; niainga hatrany avy tao amin’ny perikopan’ny fiangonana Apokalypsy Maneran-tany ary nampahatsiahy hatrany moa ny Pasteur Mailhol raha nanao jery todika sy fampahatsiahivana fa raha vao avy niampita ny onin’ny Jordana ny zanak’Israely dia nandrodana ny mandan’i Jericho ary taorian’izay dia nisy nihazona ny zava-boaozona ka nahatonga ny zanak’Israely nidiran-doza ka resy teo anoloan’ny fahavalony. Inona moa no tandindon’izany zava-boaozona izany? Tsy inona tsy akory fa tandindon’ny Fanatitra sy Ampahafolon-karena izay azo lazaina fa zavatra tena sarobidy eo amin’ny fiainan’ny olona ka manahirana azy ny mamoaka azy kanefa dia miteraka ozona eo amin’ny fiainan’ny Kristiana.
Toy izao ny valopy Ampahafolon-karena
Nambarany tamin’izany ary fa rehefa afaka ny zava-boaozona dia mirotsaka amin’izay ny fitahiana ka tokony hohalehibiazina ny sompitra fitehirizam-bokatra izay tsy inona tsy akory fa vata fanaterana fanatitra no tandindon’izany raha ho an’ny Fiangonana fa raha ny tsirairay kosa dia ara-bakiteny mihintsy fa ny fitahiana tokony hiditra ao aminy no mitombo ka tokony hohalehibiaziny koa ny vata fitoeram-bary sns…
« Ary izay mahatoky amin’ny kely indrindra dia mahatoky koa amin’ny be; ary izay tsy marina amin’ny kely indrindra dia tsy marina koa amin’ny be. » (Lioka 16:10)
Tsy nijanona tamin’izay fotsiny anefa ny Pasteur Mailhol fa nampita ireo vaovao maro samihafa tsara ho fantatra mahakasika ny fiangonana izy. Anisan’ny nampahafantariny tamin’izany fa tsy ho ela dia handeha amin’ny alalan’ny fahitalavitra « Numerique » na « TNT » (Télévision Numérique Terrestre) ireo hetsika rehetra iarahana amin’ny Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany ka ho azon’ny rehetra atao ny manaraka izany mivantana na aiza no toerana misy azy na aiza. Mbola ho hitanareo miandalana eto ihany ny mahakasika izay « TNT » izay fa aza matahotra.
Raha atao jery tokana ary ny zavatra niseho tan amin’ny faritra Miarinarivo iny dia fifaliambe ny an’ny vahoakan’Andriamanitra ary fety be satria saika niampita ny onin’ny Jordana avoko ireo vahoakan’Andriamanitra rehetra fa tsy nisy ny nijanona tsy niampita.